Anembrionia: कारणहरू, लक्षणहरू, उपचार
गर्भावस्था को विकास को उपाध्यक्ष, जसमा एक भ्रूण अंडा जो गर्भाशय संग संलग्न छ, भ्रूण मा शामिल नहीं, एम्बेरियाडोनिया भनिन्छ। यस घटनाको कारण लामो समयसम्म अध्ययन गरिएको छैन। आधुनिक नैदानिक यन्त्रहरूको आगमनको साथ, यो भ्रूण को अनुपस्थिति को कारण विनाशहरु लाई अधिक विस्तार मा प्रकट गर्न सम्भव थियो।
Anembrion हुन सक्छ जब भ्रूण भ्रूण अण्डा मा रूप मा शुरू गर्न को लागि शुरू गर्दैन, या जब यो यसको विकास मा बंद हुन्छ। यसैले, पुरानो फैशनमा, एमेब्रब्रियोनियालाई जमे भएका गर्भावस्था भनिन्छ। एक नियमको रूपमा, यस्ता विनाशहरू भ्रूण विकासको पहिलो छ हप्ताहरूमा हुन्छन्।
Anembrionia - को कारणहरु
पथोलोगीले कुनै महिलाको जीवनमा आक्रोशलाई बुझाउँछ, ढाँचाको सट्टा। यो भन्न सकिँदैन कि पहिलो जमे भएका गर्भावस्थामा सबै पछि पनि निराशाजनक अन्त हुनेछ। लगभग सबै स्त्रीहरू जुन गर्भवती जमे भएका थिए, त्यसपछि स्वस्थ शिशुहरूलाई जन्म दिनुहोस्।
Anembrion, जसको लक्षणहरू हेर्न धेरै गाह्रो हुन्छन्, सामान्य गर्भावस्था जस्तो देखिन्छ। महिलाहरु विषाक्तता को लक्षण लगाउँछन्, ऊतक आकार मा थोडा बढ जान्छ, स्तन ग्रंथिहरु लाई गले लगाई जान्छ, मासिक धर्म को उत्पन्न हुन्छन। सामान्यतया यस अवस्थामा, स्त्री गर्भावस्था पुष्टि वा अस्वीकार गर्नको लागि स्त्री रोग विज्ञान विभागमा जान्छ। अल्ट्रासाउन्डको सहयोगमा, डाक्टरहरूले भ्रूण अन्डामा भ्रूण हो कि भनेर स्थापित गर्न सक्छन्, र यदि हां, चाहे यो सही तरिकाले विकास गरिरहेको छ।
केहि महिलाहरु मा, शरीर आफैले एनीब्रेसन को जवाब दि्छ, र भेदभाव हुन्छ। यही छ, प्रतिरक्षा प्रणालीले बाह्य निकायको रूपमा खाली भ्रूण अन्डालाई पहिचान गर्यो र अचानक यसलाई हटाइयो।
आज सम्म, यो मानिन्छ कि एमब्र्रन, जो कारणहरु को एकदम विविध विविध हुन्छन्, धेरै उल्लंघन को कारण पैदा हुन सक्छ। पहिलो, आनुवंशिक पूर्वापेक्षा पूर्वमा राखिएको छ, यो छ भने, यदि आमाबाबुमा क्रोमोजोम सेट गलत छ, त्यस्ता गर्भावस्था विफलता हुन सक्छ। आमाबाबुको अभिभावकीय कक्षहरूमा परिवर्तनहरूको कारण पनि एनिम्रिजन हुन सक्छ। उदाहरणको लागि, एक स्वस्थ अण्डा र पाण्डुलिकल स्पर्मेटोजोन मर्ज गर्न सक्छ, र यसको विपरीत, जो पनि विकासका प्रारम्भिक चरणहरूमा धेरै माथिका मृत्युको मृत्यु हुन्छ।
एमेमब्रियनको रूपमा यस्तो रोगको उद्भवको अन्य अवस्थामा, कारण भ्रूणमा बाह्य प्रभावहरू हुन्। उदाहरणका लागि, गर्भावस्थाको प्रारम्भिक चरणमा मातृद्वारा पठाइएको संक्रामक रोगहरू हुन सक्छ; विषाक्त पदार्थहरूको असर, विकिरण; हार्मोनल विफलता; खराब बानीहरू (शराबको प्रयोग, लागूपदार्थ)।
निस्सन्देह, हरेक महिलाको लागि गर्भावस्था राख्न को लागी महत्त्वपूर्ण छ, यसैले यदि तपाईंलाई एमब्र्रेसनलाई सम्भावित छ भने तपाईलाई निदान गर्न गल्ती नगरेको अध्ययनको श्रृंखला चाहिन्छ। सामान्यतः एक भ्रूण को अनुपस्थिति गर्भाशय को सानो आकार द्वारा संकेत गरिएको छ, यद्यपि यो अनुमान छ कि यो लामो हुनु पर्छ। यसबाहेक, एक अल्ट्रासाउन्डले प्रदर्शन गर्दछ जुन भ्रूणको उपस्थिति वा अनुपस्थिति इंगित गर्दछ। र अर्को सूचक कोरियोनिकिक गोनडोट्रोपिन हो। जमे भएका गर्भावस्थाको साथ, यसको संख्या हप्ताको निम्न सूचकांक विशेषतासँग मेल खान्छ जुन भ्रूणको मृत्यु भयो।
गर्भावस्था विकास को यस रोग संग, एमेमब्रियन को रूप मा, उपचार को एक एकीकृत दृष्टिकोण को आवश्यकता हो। दुर्भाग्यवश, महिलाको लागि जमे भएका गर्भावस्था संग त्यहाँ एक मात्र तरिका हो - गर्भाशय स्क्रैपिंग र जटिलताबाट बच्न भ्रूण अन्डा हटाउन। यदि अवधि छोटो छ, त्यसपछि एक गर्भपात गर्भ हुन्छ। तथापि, यी प्रक्रिया पछि निराशा नगर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला, पछिल्लो सामान्य गर्भावस्था को लागि गर्भाशय म्यूकोसा बहाल गर्न लाई सिफारिस गरिएको छ। यस उद्देश्यका लागि, धेरै औषधि र भिटामिन परिसरहरू निर्धारित गरिएको छ। पुनःप्राप्ति सामान्यतया तीन देखि छ महिना लाग्छ, जसको समयमा महिलालाई संरक्षित हुनुपर्छ। यदि विषाक्तता को दोहराया मामलाहरु दोहोर्याइएको छ भने, थप विस्तृत निदान र उपचार आवश्यक छ।
किन मुखबाट सास गर्न हानिकारक छ? मुखमा ढोका: यो के भन्छ?
निपल्स बाट आवंटन देखेको छ - के यो सबै भन्दा खराब लागि तयारी गर्नु आवश्यक छ?
प्यान्रेट्रेटिस रोगको लक्षण, वा अग्ला अनुहारहरू पेन्च्रेटाइटिसमा देखा पर्दछ
निचो पेटमा कोलोइटिस। के म एक अलार्म आवाज गर्नुपर्छ?
पीठको बायाँ छेउमा दुखाइ किन प्रकट हुन्छ?
सुक्खा खोकी को मिश्रण।
बेलारिना अन्ना टेकोमोरोवा: जीवनी र व्यक्तिगत जीवन
मास्को रेस्टुरेन्ट "MariVanna": फोटो र समीक्षा
समीक्षा, मूल्यहरू: "बीलाईन तालिका 2" को समीक्षा। गोली "बीलाईन ट्याब 2"
Strelnikova मा ब्रेकिंग: अभ्यास, विनाश, समीक्षाहरू
आज म तिम्रो आईप्याडका लागि एक एन्टिभाइरस चाहिन्छ?
WWII राम्रो चलचित्र
शंकु र acorns देखि शिल्प। शंकु र तपाईं बच्चाहरु संग के acorns के शिल्प
अवधारणा र प्रकार: को सरकार फारम। प्रशासन र राज्य संरचना